Akukho Ukupaka | Martech Zone
ULwesithathu, May 2, 2007 NgeSonto, Septhemba 30, 2012 Douglas Karr
Ayikho into efana nokuya emsebenzini nokuya egaraji olikhokhelayo futhi akukho ndawo yokupaka esele! Kube nengqungquthela edolobheni namuhla ngakho igalaji laphazamisa lathengisa zonke izindawo. Ngakho-ke wonke amakhasimende ajwayelekile UKHOKHA bekufanele akhokhe kwelinye igalaji noma angene endaweni ethile.
Ngikhethe ukuba nobuciko obuncane ngomsebenzi wami wokupaka - ngipake ngqo phambi komnyango wesitezi sesi-6! Uma ngidonswa ngizovele ngishaye isivalo sami. Bengifuna ukungena ekuseni kakhulu ukwenza ukubuyekeza komkhiqizo futhi ngichithe imizuzu engama-30 ngizama ukupaka! Engangisebenza naye nomngani wami u-Emily bebecabanga ukuthi kuyahlekisa ukuthi udubule ifoni yakhe yekhamera:
Kuyinto enhle kabi ukwenzelwa amakhasimende ukungcolisa namakhasimende akho akhokhayo esikhundleni se-one-timers!
OKWENGEZIWE: Angidonswanga, kepha omunye ungishiyile inothi elihle efasiteleni lami lomoya engithole ukuhlekwa yilo, “LOKHU AKUSIYO INDAWO YOKUPAKA, ISIwula!"
Ukufuna: Ithuluzi Lokuhlola Kuqala Lama-imeyili
May 2, 2007 ku-4: 19 PM
Ithrafikhi ibisabekayo namhlanje ekuseni. Ngigcine ngiphuma emotweni ngiqhamuka emabhuloki ambalwa ukusuka emsebenzini ukuze unkosikazi wami enze umhlangano ekuseni kakhulu. Igalaji lami lokupaka liyathanda ukuzithengisa kunoma iyiphi ingqungquthela esedolobheni. Njengawe, angikaze ngiqonde ukuthi kungani amagaraji okupaka ethanda ukungawanaki amakhasimende abo ajwayelekile ngaphezu kwamakhasimende angu-1.
May 2, 2007 ku-10: 42 PM
Isizathu sokuthi kungani bekwenza kulula. Njengobudlelwano obuningi obuhlukumezayo amakhasimende ajwayelekile aqhubeka nokubuya.
Izinto ezinjengalezi ngeshwa zenzeka ngaso sonke isikhathi, ezinye izindawo zokudlela zibeka phambili ukulethwa / iveni uma kuqhathaniswa namakhasimende asendlini (ngake ngalinda amahora amabili ngenxa yalokhu).
Njengekhasimende ukuphela kwento esingayenza ukuvota ngezinyawo zethu, futhi sikhulume kakhulu ngakho. Isondo eliminyene lithola igrisi.
Into ebuhlungu ngesimo segaraji lokupaka ukuthi imvamisa iyindlela engcono kunazo zonke (intengo noma indawo) ngakho-ke bakuthola ngaphezu komgqomo.